Waa maxay macnaheedu in Masiixu ku jiro? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Oraah aan horay u maqalnay. Albert Schweitzer wuxuu ku tilmaamay in Masiixa kujiro qarsoodiga ugu weyn ee waxbarista rasuul Bawlos. Ugu dambeyntiina Schweitzer waxay ahayd inay ogaato. Maaddaama uu ahaa caalim fiqi-yaqaan ah, muusigiste iyo dhaqtar muhiim ah, Alsatian wuxuu ka mid ahaa Jarmalka ugu caansan qarnigii 20-aad. Sanadkii 1952 waxaa lasiiyay abaalmarinta Nobel. Buuggiisa 'The Mysticism of the Rasuul Paul', oo la daabacay 1931, Schweitzer wuxuu ku nuuxnuuxsaday qaybta muhiimka ah in nolosha Masiixiyiinta ee Masiixu aysan ahayn Ilaah-qarsoodiga, laakiin, sida uu isagu isagu ku tilmaamay, Masiixa-mysticism. Diimaha kale, oo ay ku jiraan nebiyadii, maal iibiyayaal ama faylasoofyaal - nooc kasta ha ahaadeene - waxay raadiyaan "Ilaah". Laakiin Schweitzer wuxuu aqoonsan yahay Paul ee rajada Masiixiga iyo nolosha maalinlaha ah inay leeyihiin jihayn gaar ah oo gaar ah - taas oo ah nolosha cusub ee Masiixa.
Waraaqihiisa Bawlos wuxuu adeegsaday erayga "Masiixa" wax aan ka yarayn laba iyo toban jeer. Tusaalaha wanaagsan ee tan waa qoraalka qoraalka 2 Korintos 5,17: “Sidaa darteed: haddii qof Masiixa ku jiro, waa abuur cusub; Dadkii hore wuu dhammaaday, oo bal eeg, wax cusub ayaa noqday. Ugu dambeyntiina, Albert Schweitzer ma uusan aheyn Christian Orthodox, laakiin dad yar ayaa ku tilmaamay ruuxa masiixiga inuu si aad ah uga fiican sidii uu sameeyay. Wuxuu ku soo koobay fikirkii rasuul Bawlos ee laxiriira ereyadan soo socda: “Isaga [Bawlos], rumaystayaasha waxaa lagu badbaadiyey xaqiiqada ah in lala wadaago Masiixa inay galaan xaalad aan naxariis lahayn wakhtiyada dunidan dabiiciga ah iyagoo dhinta si qarsoodi ah iyo sarakicidda isaga. oo iyagu waxay ku dhex jiri doonaan boqortooyada Ilaah. Masiixa, xaggiisa waa laga xorreeyay dunidan oo waxaan galnay qaabkii boqortooyadii Ilaah, in kastoo aan wali muuqan ... » (Faahfaahinta Rasuul Bawlos, p. 369).
Fiiro u yeelo sida Schweitzer u muujinayo in Bawlos u arko labada dhinac ee imaatinka Masiixu ku xiran yahay dhammaadka waqtiga - boqortooyada Ilaah nolosha hadda iyo dhammaystirka nolosha mustaqbalka. Qaar baa laga yaabaa inaysan oggolaan Masiixiyiinta inay ku dhex wareegayaan ereyo ay ka mid yihiin "mysticism" iyo "Masiix-mysticism" iyo inay si ka sii badan ula macaamilaan Albert Schweitzer; Si kastaba ha noqotee, waa lama huraan in Bawlos run ahaantii ahaa nin aragti iyo muuqaal ah. Wuxuu lahaa aragtiyo badan iyo muuqaallo ka badan kuwa xubnaha kaniisadda ka mid ah (2 Korintos 12,1: 7). Laakiin sidee waxaas oo dhami ay ula xiriiraan ereyo la taaban karo oo sidee loola heshiin karaa dhacdada ugu muhiimsan taariikhda aadanaha - sarakicidda Ciise Masiix?
Si toos ah loogu yiraahdo, mowduuca qarsoodiga ayaa muhiimad weyn u leh fahamka qoraallada odhaahda sida Rooma 6,3: 8: «Ama miyaadan ogayn in kulli lagu baabtiisay Ciise Masiix inay dhimashadiisu tahay baabtiisay? Haddaba waxaynu isaga kula aasannay baabtiiska dhimashada dhexdeeda, si, sidii Masiixa kuwii dhintay loogaga sara kiciyey ammaanta Aabaha, inaguna aannu ku dhex socon karno nolol cusub. Maxaa yeelay haddii aan isaga xiriir la leenahay oo aan isaga la mid noqonay dhimashadiisa, innaguna waxaynu kula mid noqon doonnaa wakhtiga sarakicidda ... laakiin haddii aan Masiixa la dhimannay, waxaan rumeysan nahay in aannu isaga la noolaan doonno ... »
Tani waa Bawlos sida aan isaga u naqaanno. Sarakicidda wuxuu u arkayay isku xidhka barashada Masiixiyada. Markaa, baabtiisku macnaheedu waa Masiixiyiintu maahan oo keliya in lagu aasiyo Masiixa, waxay sidoo kale calaamad ahaan ula wadaagaan sarakicidda isaga. Laakiin halkan waxoogaa bay ka baxsantahay tusaalaha tusaalaha ah. Fiqi ahaaneeddan casriga ah waxay u socotaa gacanta iyada oo la adeegsanayo qiyam wanaagsan oo dhab ah. Bal u fiirso sida Bawlos u sii wado mawduucaan warqaddiisii ​​uu u diray Efesos cutubka 2aad, aayadaha 4-6: «Laakiin Ilaaha naxariista hodanka ahu wuxuu ku jiraa jacaylkiisa weyn ... sidoo kale annaga oo dhintay. dembiyadiinnii, oo Masiixa lagu soo noolaysiiyey - nimco lagu soo badbaadiyey, oo isaguu inala sara kiciyey oo jannada inagu dhex dhigay Ciise Masiix. Siday ahayd Mar labaad aqri: Miyaynu jannada ku jirnaa Masiixa?
Sidee taasi noqon kartaa? Waa hagaag, mar kale, ereyada rasuul Bawlos looguma jeedin macno ahaan iyo gunaanad ahaan halkan, laakiin waa tusaale ahaan, run ahaantii sheeko ahaan, macno ahaan. Wuxuu sharraxayaa inay ku mahadsan tahay awoodda Ilaah inuu siiyo badbaadada, taas oo lagu muujiyey sarakicidda Masiixa, haddaba waxaan ku raaxeysan karnaa ka qaybqaadashada boqortooyada jannada, oo ah meesha Ilaah iyo Masiixa, iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah. Tan waxaa innaga ballan qaaday noloshii Masiixa, sarakiciddiisa iyo uurkiisa. Waxaas oo dhan waa suurtagal sababtoo ah Masiixa dhexdeeda. Waxaan ugu yeeri karnaa garashadan mabda'a sarakicidda ama soo sarakicista.
Mar labaad, waxaan eegi karnaa oo keliya cabsida xoogga weyn ee wadista ka timaada sarakicidda Rabbigeenna iyo Badbaadiyeheenna, annagoo og in ayan ahayn munaasabadda taariikhiga ah ee ugu muhiimsan, laakiin sidoo kale ay tahay khudbad u jeedinaysa wax kasta oo rumaystayaasha adduunku ay ku deeqaan. rajo iyo laga fili karo. "Masiixa" waa eray muuqaal ah, kaasoo, si kastaba ha noqotee, ka sii fogaanaya astaamihiisii ​​saxda ahayd, halkii isbarbardhiga laheyd oo macnaheeda aad u qoto dheer. Waxay si dhow ula xidhiidhaa weedha kale ee mucjisada ah ee “jannada lagu isticmaalo”.
Tixgeli sharraxaadaha muhiimka ah ee qaar ka mid ah qeexitaannada Kitaabka Quduuska ah ee Efesos 2,6. Waxyaabaha soo socdaa waa Max Turner ee The New Bible Commentary, qarnigii 21aad: "In la yiraahdo noloshii Masiixa baa la nooleeyay waxay umuuqataa inay tahay noocii gaagaabanaa ee bayaankii ahaa inaan Masiix la soo sara kicin," waana awoodnaa uga hadal sidii inay taasi mar hore dhacday, maxaa yeelay, marka hore, dhacdada muhiimka ah ee sarakicidda [Masiixa] waa la soo dhaafay iyo tan labaad, waxaan durba bilownay inaan kaqeybqaadno nolosha cusub ee la abuuray iyada oo loo marayo is weheshankeenna waqtigan lala joogo .. (P. 1229).
Dabcan waxaan ku midooban nahay Masiixa xagga Ruuxa Quduuska ah. Sidaa darteed, fekerka adduunka ka dambeeya ee fikradahan aadka u sarreeya ayaa loogu muujiyey qofka rumaysta ah oo keliya Ruuxa Quduuska ah.Hadaba bal eeg faallooyinka Francis Foulkes ee ku aaddan Efesos 2,6 ee Axdiga Tyndale: «Efesos 1,3, rasuulku wuxuu hoggaaminayey Ilaah baa wuxuu inagaga barakeeyey Masiixa dhammaan barakada ruuxiga ah ee jannada ku jirta. Hadda wuxuu caddeeyaa in nolosheena uu hadda jiro, oo lagu dhigay xukunkii jannada ee Masiix ... Thanks to guusha Masiixu ka gaadhay dembiga iyo dhimashada iyo kor u qaadistiisa, aadanaha ayaa laga qaaday cadaabta ugu hooseysa oo jannada lafteeda ' (Calvin). Hadda waxaan ku leennahay xuquuqda jannada (Filiboy 3,20); iyo halkaas, oo ka madax bannaan xaddidaadaha iyo xaddidaadaha adduunka lagu soo rogay ... waxaad ka heli doontaa nolosha dhabta ah » (P. 82).
Buuggiisa farriinta ee Efesos Marka laga hadlayo Efesos 2,6, John Stott wuxuu faallay sida soo socota: «Waxa anaga na fajiciyaa, si kastaba ha ahaatee, waa xaqiiqda ah inuusan Bawlos halkan wax ka qoraynaynin Masiixa, ee uu inaga quseeyo. Isagu ma xaqiijiyo in Ilaah kiciyey Masiixa, oo sarraysiiyay oo uu ka dhigay xukun jannada, laakiin inuu ina kiciyay Masiixa, oo sarraysiiyay oo uu ina geliyey xukunka jannada ... Fikirkaan ku saabsan wadajirka dadka Ilaah ee Masiixu waa aasaaska Masiixiyada Masiixiga Cusub . Sida dadka ku jira Masiixa, waxay leeyihiin midnimo cusub. Iimaanka uu la leeyahay Masiixa, runtiina waxay ka qaybqaadataa sarakiciddiisa, u dabbaaldegaan iyo xaruntiisa. »
Isaga oo adeegsanaya "hay'ad", Stott waxa loola jeedaa dareenka fiqi ahaaneed ee ku saabsan xukunka Masiixa ee hadda ka sarreeya dhammaan abuurista. Sida laga soo xigtay Stott, dhammaan hadallada ku saabsan qaanuunkayaga guud ee Masiixa ma ahayn "khuraafaadka Masiixiyiinta ah ee aan macnaha lahayn". Saas ma aha, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah khuraafaadka masiixiga xitaa waa laga gudbaa. Stott wuxuu raaciyay: "Jannada dhexdeeda, dunida aan la arki karin ee dhabta ah ee ruuxiga ah, halkaasoo awoodaha iyo awoodahu ku xukumaan (3,10; 6,12) iyo meeshii Masiixu wax walba ku xukumo (1,20), Ilaah dadkiisii ​​buu ku barakeeyey Masiixa (1,3) oo wuxuu geliyay xukunkii jannada ee Masiix lala galay ... Waxaa shaqsi ahaan loo xaqiijiyey inuu Masiixu dhinac cusub inaga siiyay iyo guus cusub oo dhinaca kale ah. Waxaan dhintay, laakiin waxaa naloo dhigay ruuxa nool oo feejignaan leh. Waxaa nalagu qabtay xabsi laakiin waxaa nalooga dhigay xukunka jannada.
Max Turner waa sax. Erayadaas waxaa ku jira astaamo saafi ah oo saafi ah - sida qarsoodiga ah ee u muuqda baridaani. Waxa Bawlos halkan ku sharxay waa macnaha dhabta ah, macnaha qoto dheer ee nolosheena cusub ee Masiixa. Macnaha guud, ugu yaraan saddex waji waa in la baaro.
Saamaynta la taaban karo
Ugu horreyntii, illaa hadda badbaadadooda, Masiixiyiintu waa "sida ugu wanaagsan ee meeshuu u socday". Kuwa ku jira Masiixa "dembiyadooda waa laga cafiyey Masiixa qudhiisa. Waxay la wadaagaan geerida, aaska, sarakicidda, iyo u dabbaaldejinta isaga, ilaa xadna, waxay horay ugula noolaadeen boqortooyada jannada. Baristaan ​​waa inaysan u adeegin sidii iskuday ujeedo ah. Waxay asal ahaan ka hadashay Masiixiyiintii ku nooleyd xaaladihii ugu xumaa ee magaalooyinka musuqmaasuqa ahaa iyada oo aan la helin xuquuqdii madaniga iyo siyaasadeed ee aan inta badan iska qaadno. Akhristaha Rasuul Bawlos, geerida seefta Roomaanka gebi ahaanba waa suurtagal, in kasta oo aan la iloobin in dadka wakhtigaas badankood ay ahaayeen uun 40 ama 45 sano jir si kastaba.
Bawlos sidaas ayuu ku dhiirigelinayaa akhristayaashiisa fikir kale oo ka soo qaatay barashada aasaasiga ah iyo astaamaha caqiidada cusub - sarakicidda Masiixa. Inaad ku jirto "Masiixa" macnaheedu waa in Ilaah, markuu isagu fiirinayo, uusan arkin dembiyadeenna. Isagu wuu arkaa Masiixa. Casharna noogama dhigi karo rajo dheeraad ah! Tan ayaa mar kale lagu xoojiyay Kolosay 3,3: "Sababta oo ah waad dhimatay oo noloshiinnuna Masiixay kula qarsoon tahay Ilaah". (Zurich Bible).
Midda labaad, inaad ku jirto "Masiixa" macnaheedu waa inaad ku noolaato sida Masiixi ah laba adduun oo kala duwan - adduunkan maalin kasta xaqiiqda iyo "adduunka aan la arki karin" ee runta ruuxiga ah, sida Stott ugu yeerayo. Tani waxay saameyn ku leedahay sida aan u aragno adduunkan. Sidan ayaa ah inaan ku noolaano nolol garsoor ku sameyneysa labadan adduun, oo ah waajibkayaga ugu horeeya ee daacadnimadeedu tahay boqortooyada Ilaah iyo qiimayaasheeda, laakiin dhanka kale waa inaannaan ka dhaafsan inaanan u adeegin wanaaga adduunka. Waa socod adag oo Masiixi ah oo kasta wuxuu u baahan yahay caawimaadda Eebbe inuu si badbaado leh uga badbaado.
Marka saddexaad, in lagu jiro "Masiixa" macnaheedu waa inaan nahay astaamaha guusha ee nimcada Ilaah. Haddii aabbaha jannada ku jiraa dhammaan waxaas noo sameeyey, oo ah inuu ina siiyo boos Boqortooyada jannada, waxay ka dhigan tahay inaan ku noolaanno sidii danjirayaasha Masiixa.
Francis Foulkes ayaa sidan u dhigaya: "Wixii Ilaah, sida uu qabo rasuul Paul, wuu fahmayaa kaniisadiisa inay ka sii gudubto naftooda, furashada, iftiinka iyo abuuritaanka cusub ee qofka, ku saabsan midnimadooda iyo guushooda, xitaa kusaabsan maraggooda xagga adduunyo. Taas beddelkeeda, kaniisaddu waa inay u marag kacdaa dhammaan abuurniinta ka dhanka ah xigmadda, jacaylka iyo nimcada Ilaah ee ku jirta Masiixa » (P. 82).
Sidee run tahay. In lagu jiro "Masiixa", si loo helo hadiyadda nolosha cusub ee Masiixa, in la ogaado dembiyadeenna qarsoon oo xagga Ilaah laga helay isaga - waxaas oo dhan waxaa loola jeedaa inaan ku dhaqano hab Masiixi ah dadka aan la macaamilayno. Annagu Masiixiyiin ah waxaan u socon karnaa dariiqyo kala duwan, laakiin xagga dadka aan halkan kula nool nahay waxaan kula kulannaa ruuxa Masiixa. Sarakiciddii Badbaadiyeheenna, Eebbe nama tusin astaamaha awooddiisa, si aan u nimaadno wax aan waxtar lahayn, laakiin waxaan uga marag furaa wanaaggiisa maalin kasta iyo camalkeena wanaagsan, oo muujinaya calaamad jiritaankiisa iyo daryeelkiisa aan xad lahayn. aduunyada geli. Sarakicidda Masiixa iyo ubaxnimadiisu waxay leeyihiin raad xoog leh xagga aragtideena ku wajahan dunida. Caqabadda aan wajaheyno waa in aan ku noolaano sumcaddan 24 saac maalintii.